ထိမိလွန်းတဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို တင်ပေးလိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ – Shwe Naung
ထိမိလွန်းတဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို တင်ပေးလိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ
N N | January 24, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ ကတော့ အမိုက် စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို လူမှုကွန် ယက် စာမျက်နှာ ထက် တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူမ ကတော့ ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင် သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ် တွေရဲ့ အချစ်တော် လေးဆို ရင်လည်း မမှားပါဘူး။
သူမ ကတော့ ယခုမှာ အလန်းစား ဖက်ရှင် လေးကြောင့် ဆွဲဆောင် မှုရှိတဲ့ အလှတရား လေးပေါ်လွင် နေပြီး အမိုက်စားပိုစ့်လေးတွေပေး နေခဲ့ပါတယ်။
သူမ ကတော့ ”ဘာကြည့် တာလဲမောင်” ဆိုပြီး အမိုက်စား ပုံရိပ် လေးတွေနဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ် တွေအတွက် မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စား ပုံစံလေးနဲ့ ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော် ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါ ပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာ ကြည့် နိုင်ပါတယ်။
မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ ကတော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင် လျက်ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် တွေထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင် ဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်လျက် ရှိနေကာ ကြော်ငြာ တွေကိုလည်း ရိုက်ကူး လျက်ရှိ နေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး တွေကို ဝတ်ဆင် လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အား ပေးမှုရော ယောကျာ်းလေးပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Crd: Dw- shweyoe
ခြူးလေးရဲ့ အမိုက်စား TIK TOK ဗီဒီယိုလေး…
မော်ဒယ်လ် Lလစ်ရှားရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ…..
အောက်ကြည့် စတိုင်အမျိုးမျိုး နဲ့ အနက်ရောင် ဖက်ရှင်လေး နဲ့ အရမ်းကို ဟော့ဖြစ်နေတဲ့ မော်ဒယ် ဖြူသိင်္ဂကျော်…..
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနှင့် အထာကျကျ အသားကပ် ၀တ်စုံလေးပီး ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ခင်သဇင်ရဲ့ ပုံလေးများ………
သားကြီးလေးရဲ့ (၃)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူလေး ပြုလုပ်ပြီး ကောင်းမှု ကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် သဇင်ရဲ့ ပုံလေးများ……….
ပြည်သူချစ်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ ၂၅ နှစ်မြောက်မွေးနေ့လေးကို ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ မောင်လေးပိုင်ပိုင် ရေဆိုပီးတော့ မွေးနေ့ဆုတောင်း ပေးလိုက်တဲ့ လုလုအောင်
ပရိတ်သတ်တို့ရဲ့ အချစ်တော် မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အသက်(၂၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကြောင်း……….
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနှင့် အထာကျကျ လှပနေတဲ့ Lလစ်ရှား ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ……
အမိုက်စား‌ ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လုလုအောင်ရဲ့ အကြမ်းစား ပုံရိပ်လေးများ……..